घर खरानी हुनबाट जोगिएको त्यो साँझ | Nagarik News - Nepal Republic Media
घर खरानी हुनबाट जोगिएको त्यो साँझ
२० कार्तिक २०७७ ५ मिनेट पाठ
नेपालमा कोरोना संक्रमणको प्रवेशसँगै सुरु भएको लकडाउनले धेरैको दैनिकी फैरिन पुग्यो । अत्यावश्यक बाहेकको समय घरभित्रै बस्ने मेरो दैनिकीको आठौं महिनामा छिमेकिको लापरबाहीका कारण बेघर हुनबाट बालबाल बाँचे । मंगलबारको साँझको त्यो लापरबाहीपूर्ण घटना टलेपनि मेरो मानसपटलमा कैयन प्रश्न र डर छाडेर गएको छ ।
मंगलबार दिउँसो ५ बजे । साधैं झै म व्यायामका लागि दोस्रो तल्लामा उक्लिए । केहिबेर व्यायाम गरेर बाहिरिए । छतबाट राजमार्गतर्फको चहलपहल चियाउँन खोज्दा कालो मुस्लोले ढाकिसकेको थियो । मैले मोबाइल झिकेर भिडियो खिच्न थाले । कारण वातावरण नै मुस्लोले कुहिरिमण्डल बनाउने हरकत अक्षमय अपराध हो । भिडियो खिच्दै गर्दा मुस्लो झनझन बढ्न थाल्यो । छिमेकी प्रमोद ठाकुरको घर अगाडि बालिएको सामग्रीबाट मुस्लोसँगै आगोका लप्का उड्न थाल्यो । त्यो लप्का विजुली, टोलिफोनलगायत तार छुन खोज्दै थियो । म भिडियो खिच्न छोडेर लहान प्रहरी प्रमुख डिएसपी शरत थापा क्षेत्रीलाई फोन गरेर घटना जानकारी गराउँदै तल ओर्लीन थाले ।
आगोको लप्का फैलिँदै उत्तरतर्फ आइरहेको थियो । जसको पहिलो चपेटामा मेरो घर थियो । के सामान बाहिर गर्ने नगर्ने अलमलका बीच श्रीमतीलाई छिटो ग्यास चुलोबाट सिलिण्डर अलग राख्न भन्दै म आफ्नो मोटरसाइकललाई सुरक्षित स्थानमा राख्न हतारिए । कारण आगोको लप्का मेरो घर छोए पहिलो निशाना मोटरसाइकल नै हुन्थ्यो । म मोटरसाइकल सुरक्षित गरेर फर्किदा श्रीमती ग्यास सिलिण्डलगायतका आवश्यक सामानसहित छोरीहरुलाई लिएर सडकमा सुरक्षित भइसकेकि थिइन् ।
श्रीमती छोरीहरु चिच्याउँदै घर बचाउन गुहारर्दै थिइन् । वृद्ध बुवा घरिघरि मूल गेट खोल्दै घर टोलाउँदै छाती पिटिरहेको देखेर मैले आफूलाई रोक्ने सकिन । भक्कानो छुट्यो । त्यतिन्जेल छिमेकीहरुको भीड जम्मा भैसकेको थियो । भीडमध्ये अधिकांश रमिते मात्र थिए । मेरो मूल गेट अगाडी खुट्टीखोला सिँचाइ नहर छ । जसमा पर्याप्त पानी रहन्छ, थियो । तर भीडमध्ये कसैले पनि एक बाल्टिन पानी आगोमा झोक्ने कष्ट गरेनन् । बरु गोजीबाट मोबाइल भिकेर आगोको लप्का उडिरहेको तस्बिर खिचेर रमाइरहेका थिए । कतिले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्दै घटना विश्लेषण गर्दै थिए ।
लहान प्रहरी प्रमुख डिएसपी थापा तारन्तार फोन गरेर मलाई नआतिन ढाड्स दिएरहेका थिए । सिरहा प्रहरी प्रमुख उमाशंकर पंजीयारले फोन गरेर गोलबजार र राजबिराजबाट थप बारुण यन्त्र झिकाइसकिएको र घर जोगाउन घटनास्थलमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भरोसा लिदाउँदै थिए । उहाँहरुको भरोसाले मेरो घर अडिरह्ने हुन कि नाइ विश्वाससँगै डर पनि उत्तिकै लागिरहेको थियो । लहान नगरपालिकाको बारुण यन्त्रले आगोको उद्गमस्थल ठाकुरको घरतिरबाट पानीको फोहोरा दिन थालेपछि सास पल्टियो । अब हाम्रो घर जोगिने भयो भन्दै श्रीमतीको अनुहारमा भरोसाको मुस्कान छुट्यो । उनको उज्यालो अनुहार हेरेर सुकून महसुस गरें ।
प्रहरीले बारुण यन्त्रको मद्दतले आगोमाथि काबू पाउने भरपूर प्रयास गरिरहेको थियो । त्यहीबीचमा यन्त्रमा पानी सक्यो । पानी लिन फर्किदा आगोको लप्का उठ्यो । र, त्यो लप्का मेरो भण्डार घर टाँसिएर रहेको कबाडको गोदामलाई आफ्नो चपेटामा लियो । हेर्दाहेर्दै आगो पसरेर भण्डार घरको उत्तर कुनासम्म पुग्यो । जहाँबाट मेरो निवासको जग सुरु हुन्छ । त्यसपछि श्रीमतीको चिच्याहट, बुवाको छटपटी, दिदीको रोदनले मेरो मन फाट्यो । आँखै अगाडी हाम्रो घर आगोले खरानी बन्ने भयो । सम्पूर्ण सामान त्यही आगोमा समेटिने भयो । हामी बेघरबार हुने भयौं । सारा जिवनको कमाइ खर्चेर ठड्याएको घर नै नभएपछि बाच्नुको के अर्थ भन्दै बुवा बिलौना गरेको सम्झिँदा जोरजोरले रुन मन लाग्छ ।
त्यही दर्शक भीडबाट केहि परिचित अनुहार मेरो घर तर्फ पाइला सारे । उनीहरु थिए नेपाली कांग्रेसका सिरहा उपसभापति विष्णुप्रसाद गुप्ता र नेता शैलेन्द्र यादव । बाल्टिन ल्याउनुस तपाइको घर हामी जोगाउँछौं भन्दै दौडिएर आएका गुप्ता र यादव बाल्टिन लिएर अगाडीको नहरतर्फ हानिए । उनीहरुलाई नेपाल प्रहरीका जवानहरुले सघाइरहेका थिए । भण्डार घरको छतमा चढेर आगोमा पानी छ्याप्न मेरो भन्जाका साथी मोहम्मद असलमले साथ दिइरहेका थिए । बारुण यन्त्र पानी भरेर फर्किदासम्म गुप्ता, यादव र असलमसहित प्रहरीहरुले बाल्नि बाल्नि पानी छ्यापेर आगोलाई अगाडी बढ्नबाट रोकिरहेका थिए । सहरमा बसेर पनि गाउँजस्तो सहयोगी भावका उहाँहरु मेरा लागि सच्चा सामाजवादी हुन । उहाँहरुको सहयोग नपाएको भए मेरो परिवारसँग आफ्नो घर खरानी भएको साक्षी बन्नुको बिकल्प थिएन ।
घर टाँसिएरै पश्चिमपट्टी कवाडको भण्डार छ । त्यो टाँसिएकै होटेल इष्टपोइन्छ । उत्तरमा घना मानवबस्ती । र, दक्षीणमा पूर्वपश्चि महेन्द्र राजमार्ग छ । मेरो घर टाँसिएकै दक्षिणमा प्रमोद ठाकुर र उनकी छोरीको घर । जसमध्ये एक घरमा मदिराको गोदाम छ ।
ठाकुर घरको त्यही मदिरा गोदाम अगाडी प्लाष्टिकजन्य फोहोर जलाउन आगो बालिएको थियो । सुरुवातमा आगो मधुर थियो । तर जसरी त्यसमा प्लाष्टिकजन्य फोहोर थप्दै प्रज्वलनशील पदार्थ खन्याउँदै गयो आगोको राप बढ्दै गयो । आगो अनियन्त्रित भैसक्दा समेत ठाकुर परिवार कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । न बस्तीका मान्छेलाई गुहारे । न प्रहरीलाई फोन गरे । न बारुण यन्त्रलाई नै खबर गरे । जसले उनको लपरबाही प्रष्ट्याउँछ । एक व्यक्तिको लापरबाहीको पीडासँगै अनेकन प्रश्नसाथ लिएर आएको छ । एउटा सचेत व्यतिmको लापरबाहीपूर्ण हरकत क्षम्य हुन्छ ? उनको लापरबाहीको भारी हामीले बोकिदिनुपर्ने ? उनलाई दोषअनुसारको दण्ड भोग्नुपर्दैन ? घनाबस्तीको बीचमा कबाडखाना, मदिराका गोदाम, वर्कसलगायत संचालन गर्न दिनु उचित हो ? मानव बस्तीलाई नै जोखिममा पार्नेगरी भएको लापरबाहीपूर्ण यो घटनाबाट स्थानीय सरकारको निरिहता समेत उदांगिएको छ ।
लहान नगरपालिका उपमहानगर बन्ने रेसमा छ । यस नगरका मेयर मुनी साह आफूलाई विकासमा विम्व भनेर परिचय गराउन रुचाउँछन् । नगरमा घण्टौं आगलागी भइरहँदा समेत मेयर साबको दर्शन पाइएन । अरुथोक भन्दा पनि नगरका अभिभावकसँग सान्त्वना, ढाडस र भरोसाको अपेक्षा त एउटा आगलागी पीडितले राख्छन् नै । सबैभन्दा नजिकको सरकारको दर्शन पाएँ पीडामा मलम हुने लालसा पूरा हुन सकेन नै आगो नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीलाई आवश्यक परेको एक्साभेटर समेत नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुन सकेन । डिएपी थापाले निजी एक्साभेटर नल्याएको भए कबाड गोदामको आगो पूर्ण नियन्त्रण सम्भव थिएन । र, तेज चलिरहेको पश्चिमी हावाका कारण आगो बस्तीमा फैलिने खतरा यथावत थियो ।
समाचार रिपोर्टिङको क्रममा आगलागीका घटना मेरा लागि नौलो होइन । तर, आगलागीको अनुभूति भने मेरा लागि नौलो हो । यस्तो नियती दुस्मनले पनि भोग्नु नपरोस । यो घटनाले मलाई सप्तरीको टापु गाउँ गोबरगाढाको याद ताजा बनाएको छ । वर्षेनी डुबानका कारण विस्तापनको मार खेपेर पनि त्यहाँका बासिन्दा बसाई सर्न तयार छैनन् । घर छोड्न तयार छैनन् । त्यहाँका बासिन्दाले भनेको सम्झन्छुँ,‘घर चार दिवार मात्र होइन यस भित्र सज्जाइएको कैयन यादहरुको समग्र संगालो हो । त्यसै कसरी छाडिदिउँ ।’
अन्तमा मलाई बेघर हुनबाट जोगाइदिने अग्रमोर्चामा खटिएका डिएसपी शरत थापा, कांग्रेस उपसभापती विष्णुप्रसाद गुप्ता, शैलेन्द्र यादव, भान्जा असलमलाई सलाम ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७७ १४:०४ बिहीबार
कोरोना संक्रमण आगोको लप्का लापरबाहीपूर्ण घटना
थप ६०३ मा कोरोना सङ्क्रमण, तीन जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६०३ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख ८१ हजार ५८७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
गुल्मीमा अटोरिक्सा दुर्घटनाः एकको मृत्यु, ४ जना घाइते
गुल्मीको सत्यवती-३ ठुलोलुम्पेकमा आज (बुधबार) अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन्।
ओली र माओवादीबीच सांठगांठको आशंका छ : डा. कोइराला
‘कि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्‍यो कि त अरुलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो हैन भने ओलीसँगै मिलेर जाने भन्नुपर्‍यो’ कोइरालाले भने,‘कांग्रेस अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’
'सिस्नु दलेर' शुभकामना !
अहिले फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर र एसएमएसमार्फत् नयाँ वर्षको शुभकामनाका शब्दहरू लेखेर एकअर्कामा साटासाट गर्दै आएका छन् नयाँ पिढीँ। सामाजिक सञ्जाल हिजोआज रंगिएको छ नयाँ वर्षको शुभकानाका पोष्टर, तस्बिर तथा शुभकामनाका शब्दहरुले। तर, सुदूरपश्चिममा भने नयाँ वर्षको शुभकामना दिने प्रचलन बेग्लै छ।